आफ्नो रुचि तपाईं कसरी सुन्न हुनेछ एप्पल वाच संगीत तपाईं के सुन्न सक्षम हुनेछ? छलफल सबै कुराहरू, तपाईँको हेर्ने मोडेल मा निर्भर. यहाँ तपाईँले सबै विभिन्न कार्यहरु आईफोन जोडी बिना तपाईं आफ्नो एप्पल वाच प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ प्राप्त हुनेछ.
कुनै पनि स्याउ वाच चलिरहेको watchOS 4.1 वा उच्च तपाईंले गरे संग्रह र प्लेसूचीहरू सुन्न सक्षम हुनेछ आफ्नो आईफोन . तपाईं जस्तै आवेदन मा त्यसै धुन Spotify र iHeartRadio , जस्तै स्याउ संगीत (मामला मा तपाईं एक समर्थक हुनुहुन्छ).
एक स्याउ वाच शृंखला3वा स्याउ वाच शृंखला4चलिरहेको watchOS 4.1 वा सबै माथि उल्लेख गर्न उच्च सक्नुहुन्छ, अझै यो जडान त्यसै गर्न सक्छन् स्याउ रेडियो र कुनै पनि संगीत तपाईं iCloud मार्फत अप मिलान गरेको.
जबकि थप अनुभवी मोडेल बस आफ्नो आईफोन मार्फत piggybacking द्वारा संगीत बजाउन सक्छ, यस शृंखला3र4बादल देखि वैध संगीत स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ. हामी कसरी गर्न विभिन्न तरीकाहरु मा एक गानडर लिन बारेमा तपाईंको एप्पल जागा संगीत सुन्न .
1 बिना आईफोन संगीत को लागि एप्पल वाच प्रयोग
2.1 मेरो साइटबाट अधिक
बिना आईफोन संगीत को लागि एप्पल वाच प्रयोग
तपाईंको घडी Segue. गृह स्क्रिनमा बाउन्स गर्न डिजिटल क्राउन प्रेस. संगीत आवेदन ट्याप गर्नुहोस्. त्यस बिन्दु बाट, तपाईं आफ्नो फरक संग्रह र प्लेसूची थम्बनेल माध्यमद्वारा फ्लिप गर्न सक्छन्. अर्कोतर्फ, प्लेसूचीहरू लागि खण्ड मा पुस्तकालय लागि खण्डमा र ट्याप ट्याप गर्नुहोस्, कलाकार, एल्बम, वा गीतहरू.
तपाईं त आफ्नो घडी संग समायोजित गर्ने assortments मार्फत स्वाइप गर्न सक्षम हुनेछ. एक संग्रह ट्याप गर्नुहोस्, प्लेसूची, शिल्पी, वा धुन तपाईं सुन्न चाहनुहुन्छ. तपाईं प्ले मा ट्याप गरेर तपाईंको घडीबाट तपाईंको संगीत नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ / पज बटन, निम्न ट्रयाक गर्न शेखी, वा विगतमा ट्रयाक गर्न hopping. तपाईं पनि त्यसै डिजिटल क्राउन खोल्दै गरेर मात्रा नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ.
यस लेखमा बारेमा पूर्ण जानकारी समावेश जो पढ्न बिना आईफोन संगीत को लागि एप्पल वाच प्रयोग कसरी. यहाँ तपाईँले सबै विभिन्न कार्यहरु तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ प्राप्त हुनेछ आफ्नो स्याऊ आईफोनमा जोडी बिना हेर्नुहोस् .
शान्ति इक्वेलाइजर, पीसी विन्डोजको लागि ईन्टरफेस इक्वलिजर एपीओ 10/8/8.1/7 - नयाँ संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस्
पीसी विन्डोज को लागी TopTracker 10/8/7 - नि: शुल्क डाउनलोड पछिल्लो संस्करण
अन्तर्गत फाइल: डाउनलोड फेसटाइम सँग ट्याग गरिएको: Listen Music on Your Apple Watch without iPhone